5 सर्वश्रेष्ठ स्थान आइसक्रीम युरोप मा खान | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ स्थान आइसक्रीम युरोप मा खान
युरोप भ्रमण गर्न पर्याप्त भाग्यमानी भएको छ कि ती यसलाई प्रदान गर्दछ कि उत्तेजना र साहसिक को अर्थमा थाहा. युरोप मा यात्रा धेरै तरिकामा आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ. भाषा बाट, शानदार ठाँउहरु, र शानदार खाद्य इतिहास तपाईं घर फिर्ता पाउन सक्दैन. आइसक्रिम लागि एक विशेष मिठाई दाँत भनेर ती अचम्मको कुरा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ. युरोप भर विभिन्न आइसक्रिम पार्लर शानदार स्वाद को एक विस्फोट प्रस्ताव. जे भएपनि, आइसक्रिम फिर्ता छाया मा शहर अन्वेषण को एक लामो दिन पछि बस्न र आराम गर्न सही तरिका हो. तपाईं युरोप मार्फत यात्रा र आइसक्रिम प्रेमी भने, हामी युरोप मार्फत यात्रा हाम्रो विशाल अनुभव लिएको र तपाईं को लागि एक सूची सँगै राख्न छन्. त्यसैले, यहाँ केही छन् सबै भन्दा राम्रो ठाउँ युरोप मा आइसक्रिम खान.
आइसक्रीम इटाली कहाँ खान?
इटाली जीवनको यसको प्रेम र लागि प्रसिद्ध छ स्वादिष्ट भोजन. आफ्नो आइसक्रिम दुई संयोजन देखिन्छ. धेरै आइसक्रिम प्रेमीहरूको तपाईं प्रामाणिक इटालियन gelato एक scoop स्वाद छ नगरेसम्म बस्ने छैन भनेर सहमत. धनी स्वाद र बनावट को आइसक्रिम आफ्नो शिल्प बारेमा भावुक छ कि एक व्यक्ति द्वारा गरिएको थियो कि स्पष्ट संकेतक हो. तपाईं राम्रो आइसक्रिम ठाउँ मार्फत आउन पर्याप्त भाग्यमानी छन् भने छ.
रोम युरोप मा सबै भन्दा राम्रो आइसक्रिम पार्लर को एक घर छ, दूध रूपमा. शहर आइसक्रिम प्रेमीहरूको भरिएको छ. मान्छे gelato आनंद को सुरम्य दृश्य विशिष्ट हो. तथापि, असंख्य gelato पसलहरूमा संग शहर मा, एक रूपमा बाहिर खडा लुकेका मणि कुनै पनि gelato प्रेमी भ्रमण गर्न को लागी आवश्यक छ. असंख्य पर्यटक र स्थानीय इल लाट्टे आउन बगालको. के आफ्नो आइसक्रिम त अद्वितीय तपाईं सोध्न बनाउन सक्छ? पहिले, धेरै मानिसहरू प्रस्ताव धनी र स्वादिष्ट स्वाद आनन्द. तिनीहरूले दैनिक आफ्नो gelato तयार र प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग. आफ्नो बरफ क्रीम धनी र मलाईदार छन्, नाम सुझाव रूपमा. तपाईं सोच छ भने के इल लाट्टे हालतमा आउनुहोस्, तपाईं यसलाई अनुवाद थाहा गर्न खुसी हुनेछन् “दूध जस्तै”. डेरीलाई घृणा गर्ने मानिस समेत उनीहरूको दुध मुक्त स्वादको मजा लिन सक्छन्. स्वाद अचम्मको छ. दोश्रो, मानिसहरू दोकान को माहौल पुजा गर्नु. यो रोम को सार र महसूस शामिल.
आइसक्रीम मा जर्मनी कहाँ खान?
काल्पनिक आइसक्रीम त्यस्तो चीज होइन जुन धेरैले जर्मनीसँग संगत गर्दछ. तथापि, Ballabeni आइसक्रिम यसको अविश्वसनीय scoops संग परिवर्तन गर्न यहाँ छ. यो उत्कृष्ट आइसक्रीम पार्लर आइस म्यूनिखमा अवस्थित छ र यसका बारे निम्न जानकारीहरू छन्. को पार्लर जियोर्जियो Ballabeni पर्छ, आइसक्रिम बनाउने कला मा एक grandmaster. उनले शौकको रुपमा आइसक्रिम खान थाले, र म्यूनिख सबै यसको लागि आभारी छ. धेरै पर्यटकहरु र स्थानीय पसलमा प्रेम, अविश्वसनीय समीक्षा छोडेर. जब तपाईं आफ्नो आइसक्रिम प्रयास, यो किन हेर्न गाह्रो छैन. तिनीहरूले पूर्णता आफ्नो शिल्प honed र आफ्नो क्षेत्रमा सबै भन्दा राम्रो को एक गर्दै छन्. आफ्नो आवेग हरेक scoop मा मार्फत आउँछ. थप बोनस तिनीहरूले आइसक्रिम ट्रक र निजी पार्टीहरूलाई खानपानको प्रबन्ध गर्नु सक्नुहुन्छ!
आइसक्रीम मा हंगेरी कहाँ खान?
के तपाईं कहिल्यै हंगेरी को राजधानी मा आफैलाई मिल गर्नुपर्छ, बनाउन भ्रमण गर्न निश्चित Gelarto रोजा. यो अचम्मको आइसक्रिम स्टोर छ बुडापेस्ट को हृदय. तिनीहरूले परम्परा बारेमा सबै छन्, घनिष्ठता, रोमान्स, र आवेग, जो आफ्नो काम देखिने छ. अर्को शब्दमा, तिनीहरूले क्षेत्रमा साँचो विशेषज्ञहरु छन्. तिनीहरूको आइसक्रिम सम्म, उनीहरूले मात्र उत्कृष्ट जैविक सामाग्री प्रयोग सुन्न खुसी हुनेछन्. हरेक ठूलो आइसक्रिम पसल कृत्रिम आइसक्रिम तिरस्कार. तथापि, के बनाउँछ Gelarto रोजा अद्वितीय एक गुलाब मा आइसक्रिम आकार दिन आफ्नो कालिगढ दृष्टिकोण छ. यदि तपाइँ कहिल्यै Szent Istvan मा हुनुहुन्छ एक तातो दिन को समयमा वर्ग, तपाई निश्चित रूपले गुलाब आकारको आइस क्रिमका साथ धेरै मानिस हिडिरहनु भएको छ.
अर्को भेट-आइसक्रीम पार्लर ज्यूरिखबाट हो. माथि अर्जेन्टिना देखि यसको प्रेरणा मिल्यो कि आइसक्रिम पार्लर छ. संस्थापक Rofe Bote दुई दशकसम्म त्यहाँ बस्ने र संस्कृति मा लिए. उहाँले आफ्नो fruity प्रभावित भएको थियो, ताजा, र प्राकृतिक आइसक्रिम. उहाँले स्विट्जरल्याण्ड तिनीहरूलाई ल्याए भनेर प्रभावित थियो. आज ज्यूरिख दुई पसलहरूमा छन्, र तिनीहरूले अर्जेन्टिनी जरा गर्न Aspire. तपाईंले केही स्वादिष्ट आइसक्रिम आनन्द रूपमा सक्रिय संगीत र ल्याटिन महसूस अझ आफ्नो आत्मा उचाल्न पक्का. Hasta अर्जेन्टिनी स्वाद र स्विस कौशल को एक उत्कृष्ट मिश्रण छ.
आइसक्रिम मा फ्रान्स
फ्रान्सेली कुराहरू धेरै लागि प्रसिद्ध छन्. पहिले, त्यहाँ कला प्रेम छ, वास्तुकला, र दर्शन, जो अकाट्य छ. पेरिस कि जीवित नियमका छ. दोश्रो, तिनीहरूले आफ्नो अचम्मको पकाउने लागि जानिन्छ. फ्रान्सेली भान्सा सबैभन्दा उच्च संसारमा मूल्याङ्कन हुन्, र तपाईं भान्सा मा अनुशासन आफ्नो मरुभूमिमा अप देखाउँछ पक्का हुन सक्छौं. कारण खाना लागि यो आवेग गर्न, तिनीहरूले युरोप मा सबै भन्दा राम्रो बरफ क्रीम केही छ कि कुनै आश्चर्य छ.
सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई मध्ये एक छ Berthillon. यो पेरिस र राम्रो कारण लागि सबै भन्दा प्रसिद्ध पार्लर को छ. यो 60s खोलिएको थियो र पछि कहिल्यै स्वादिष्ट आइसक्रिम सेवा गरिएको थियो. तपाईं आफ्नो स्वादिष्ट स्वाद को एक चयन गर्न स्वतन्त्र छन्, र पनि मिश्रण र तपाईं को लागि सही संयोजन फेला पार्न स्वाद मेल गर्न सक्छन्.
जहाँ यात्रा गर्न छनौट, तपाईं आइसक्रिम को राम्रो scoop रमाइलो गर्न निश्चित हो. बस फिर्ता बस्न सम्झना र दृश्यहरु आनन्द र स्वाद हुँदा त्यसो. यो सबै लिन र यी विभिन्न ठाउँमा आइसक्रिम को अचम्मको स्वाद स्वाद.
को स्वाद र स्वाद युरोप प्रस्ताव छ अनुभव गर्न तयार? पुस्तक आफ्नो रेल टिकट अब. तेस पछि, तपाईं युरोपमा आइसक्रिमको स्वादिष्ट संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ स्थान आइसक्रीम युरोप मा खान” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#शान्त होऊँ #आइसक्रिम #traveleurope eurotrip खन्चुवा